Mucamar Al-Qadaafi oo magaalada uu ka soo jeedo ee Sirta lagu dilay. – Radio Daljir
Mucamar Al-Qadaafi oo magaalada uu ka soo jeedo ee Sirta lagu dilay.
Oktoobar 20, 2011 12:00 b 0
Sirta, Oct 20- Hoggaamiyihii xilliga dheer soo xukumayay dalka Liibiya ee Mucamar Al Qadaafi ayaa maanta lagu dilay dagaal toddobaaddadii ugu dambeeyey ka soconayay magaalada uu ka soo jeedo ee Sirta ee dalkaasi.
Ra?iisal wasaaraha golaha ku meel gaadhka ah ee dalkaas ayaa warfidiyeennada xarunta dalkaasi ee Tripoli ugu xaqiijiyay dhimashada hoggaamiyihii dalkaasi, kaasoo dagaal qadhaadh kula jiray xoogagga kacdoonka ee dagaalka kula jiray maamulkii Qadaafi ?dhacdadani waa mid aan in badan soo naawilaynay? ayuu yidhi Maxamuud Jibriil ra?iisal wasaaraha golaha dalkaasi maamulka.
Warar is khilaafsan ayaa tibaaxayay qaabkii uu u dhintay Mucamar Alqadaafi, waxana wacaal daray ah oo la jaanqaadday maqalka dhiilladan ay sheegaysay in Qadaafi la qabtay xilli uu ka dhaawacmay labada lugood, halka sawir ay xuquuqdiisa leedahay AFP/Getty images uu bidhaaminayay muuqaalka Qadaafi oo uu dhiig wajigiisa iyo qaybo ka mid ah jidhkiisa ku dheehnaa.
Qadaafi ayaa markii uu u gacan galay mucaaradka loo qaaday dhanka Misraata oo ka mid ah baraha kacdoonka dalkaasi.
Dabbaal dagyo ayaa ka socday magaalooyinka Tripoli, Banghazi, iyo Misrata, kuwaas oo qayb ka ah rajada ay kacdoon wadayaasha dalkaasi ku naawilayaan in uu soo afmeermay dagaalkii Liibiya, isla xilli xaruntii ugu dambaysay ee Qadaafi ee Sirta ay guud ahaan maanta mucaaradka u gacan gashay.
Qadaafi waxa uu jiray 69 sanadood, waxana uu dalkaasi ka soo talinayay 41 sannadood, dhawaanna qaar ka mid ah xubnihii qoyskiisa ayaa qax ku galay dalka Aljeeriya, halka qaarna ay mucaaradka u gacan galeen, sida wiil uu dhalay.
Madaxda caalamka ee sida wayn nidaamkii Qadaafi uga soo horjeeday, isla markaana taageerey dagaalkii ay kacdoon wadayaasha dalkaasi la galeen ayaa bogaadiyay dilkiisa. Hillary Clinton oo ah xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay dilka Qadaafi laydh naxariiseed, halka la filayo in dalka Faransiiska oo gacan mug leh ku lahaa dagaalkii lagu riday Qadaafi uu ka hadli doono.
Mucamar Alqadaafi oo hannaanka labbiskiisa, ilaaladiisa, iyo hal adaygiisa oo duni badan ay ku dhaliili jirtay uu ahaa mid soo taagnaa in badan, ayaa noqday hoggaamihii koobaad ee lagu dilo kacdoonnada dalalka carbeed ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika dhawaan ka aloosmay.